ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းလောင်းလှူမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းလောင်းလှူမည်
Posted by etone on Dec 6, 2010 in Aung San/Aung San Suu Kyi, News | 10 comments
photo : freedom news group
NLD ရုံးချုပ်မှ သံဃာတော်များအား သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာ ဆွမ်းလောင်းလှူရန် ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ဖိတ်ကြားစာလေးပါ ။ အလှူတန်းလုပ်တာကို မသွားရ၊ အလှူမခံရ မလုပ်သင့်ပါဘူးနော် ။ ရွာသားတွေလည်း ဖိတ်စာလေးကို ကြည့်ပြီး သာဓုခေါ် နိုင်အောင် freedom news group က ကူးပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ ။
good deeds, but be mindful whatever we do
(အလှူတန်းလုပ်တာကို မသွားရ၊ အလှူမခံရ မလုပ်သင့်ပါဘူးနော် )
ဖဲကစားရင်တော့ Ace တစ်ထဲ ဝှက်ဖဲ ဆိုပြီး
( ပြည်ပမှာနေတဲ့ ရွာသဂျီးတို့ကိုကိုကြောင်တို့ မြှောက်ပေးတိုင်း လိုက်မလုပ်နေကြနဲ့ ဦး သူတို့ က နုတ်ဘွတ်ကို အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပျစ်မှာ
ချတာနဲ့ ရတဲ့ လိုင်းကနေ ဝင်အော်လို့ ရတယ် အဒူမှန်းတိတာဟုတ်ဝူး ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ နက်လိုင်းက လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းစွပ်ထားတာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်)
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု > ခင်ဗျာက မြန်မာနိုင်ငံကို မြေကြီးထဲရောက်အောင်လုပ်နေတာလား။ဒီစာကို တင်ထားတဲ့
စာမူပိုင်ရှင်က မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံကိုလွတ်လပ်မှုရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူ
အောင်ဆန်းစုကြည် အလှူလုပ်တာကို သာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ တင်ပြထားတာပါ . . . ။မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရွှေရောင်နိုင်ငံကြီးဗျ။ခင်ဗျာ ဘုရား၊တရား လုပ်တာကိုတော့ ၀င်အစွပ်ဖတ်စေချင်ဘူး။ . . . .
ခင်ဗျာလည်း လူကြီး လူကောင်းပါ. . . . ဘာပြောချင်လည်းဆိုကိုတော့ နားလည်မှာပါ။
ယခုလိုတင်ပြပေးထားတဲ့ ကိုetone ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
( ဒီစာကို တင်ထားတဲ့ စာမူပိုင်ရှင်က မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံကိုလွတ်လပ်မှုရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူ
အောင်ဆန်းစုကြည် အလှူလုပ်တာကို သာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ တင်ပြထားတာပါ . . . ။) ဒါက မင်းပြောတာ
(အလှူတန်းလုပ်တာကို မသွားရ၊ အလှူမခံရ မလုပ်သင့်ပါဘူးနော် ) ဒါက ပို့ စ်တင်တဲ့ ဒေါ်အီးတုံးပြောတာ
ပယောဂ မှန်ရင် တုန်ဆင်းလာတယ် ဆိုတာ ဒါကို ခေါ်သကွ ငါ့လူရ
ဘာသာရေးအရ မှာတော့ …………………………………….. :|
မင်းရဲ့ အကြံစည်တွေက မင်းကို နှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတာ မြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါ ငါ့လူရာ
( ဒီအလှူကို မတားမဆီးကြရင်တော့ သာဓုပါ ဗျာ သာဓု)
နှစ်ခါဘဲ ရမယ် ပြီးသွားမှ ကျန်တဲ့တစ်ခါ ထပ်ခေါ်ပေးမယ်။
တတ်သိသလောက်လေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်စုဟာ အင်္ဂါသမီးလို့ သိရပါတယ်။ မဟာဘုတ်ဗေဒင်မှာ ဂြိုလ်ဝင်ဂြိုလ်ထွက်ဟာ ဂြိုလ်သက်အတိုင်း လည်ပါတယ်။ အခု ခေါင်းဆောင်စု ဟာ ၆၅နှစ်ဆိုတော့ ၆၆ နှစ်မှာ သောကြာဂြိုလ်ကိုဝင်ပါမယ်။ အခု အ၀င်စပါပြီ။ ဂြိုလ်အင်အားက သားသမီးပါ။ သားသမီးအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကြာလေ သားသမီးအကျိုးပေးလေပါ။ ဒါပေမယ့် ဂြိုလ်ရဲ့ဆိုးကျိုးအတွက် အ၀င်ခတ်တာမျိုးအတွက် သောကြာထောင့်မှာ ရေလှူတာတို့။ သံဃာတော် တွေကို သင်္ကန်းကပ်တို့ လုပ်ပေးရင်သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါသိသလောက် ပြောပြတာပါ။ ဗေဒင်ပညာရှင်မဟုတ်တော့ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။
အောင်ပုနဲ့ MG ရေ ..
. တချို့လူတွေက ကိုယ်သာမလှူတာ သူများလှူရင် ပိတ်ပင်တတ်ကြတယ် နောက်ဘ၀ ဗြိတ္တာဖြစ်မဲ့လူမျိုးတွေကိုပြောတာပါကွာ … နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာကြီးပါ ။ တစ်ကယ်ဆို သူများအလှူလုပ်တာ ဘေးကနေမလှူရင်တောင် မုဒိတ္တာပွားပြီးနေကြည့်…တကယ် စိတ်အေးချမ်းတယ် ။ သူများကို လှူပြီး ဆိုကတည်းက ကိုယ့်မှာရှိတဲ့(ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာကို) စွန့်လွှတ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလှူရှင်ရဲ့စိတ်က မြင့်မြတ်ပါတယ် … ။အိမ်သာ ပေါ် ထိုင်ပြီး ငါ့ကျင်းဘယ်သူလာနှိုက်မလဲ ထိုင်ဟောင်နေတဲ့ ခွေးတကောင်ရဲ့စိတ်နဲ့တော့ မိုးနဲ့မြေလိုပဲ ကွာခြားလွန်းလှပါတယ် ။
အန်တီစုက အခုမှလွတ်လာလို့ အခုမှ ယတြာလေးဘာလေး ချေချင်လည်း ချေပါစေပေါ့… ။ ဟို သေခါနီးကြီးတောင် တချိန်လုံး ယတြာပေါင်းစုံ ချေနေတာ .. (အိမ်နားက လက်ကြောမတင်းတဲ့ ငမူးကြီးကိုပြောတာနော် … )
အလှူခံတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ အများကြီးဘဲတဲ့။ ၀မ်းသာစရာမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။